ဘာဖြစ်သလဲ Social CPX, Webtalk'' ကျနော်တို့မှာအများကြီးအကျိုးအမြတ် Affiliate Program ကိုယ့်? - 💌 WebTK - သင်၏လက်မှတ် WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
Webtalk လူတိုင်းကပိုအခွင့်အလမ်းများကိုချိတ်ဆက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့်ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်လာကူညီပေးလို Webtalk ကိုခေါ်ကာကျနော်တို့မှာအများကြီးအကျိုးအမြတ်လွှဲပြောင်းပရိုဂရမ်မှတဆင့်အားလုံးဝင်ငွေ 50% အထိထွက်ချေ Social CPX.
Webtalkအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းကွန်ရက်နှင့်အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပြိုင်ဘက်များမှနှစ်စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသောင်းကျန်းသည် ကြော်ငြာ, ပရီမီယံအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေ။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် Facebook နှင့် LinkedIn တို့တိုင်းအသုံးပြုသူများထံမှတစ်လလျှင် $3generate ။ အမေဇုံထုတ်ကုန်ရောင်းချမှုမှတစ်လလျှင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးလျှင်အကြောင်းကို $ 70 ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးလူမှုရေး e-commerce အသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်, Webtalk နေ့စဉ်အသုံးပြုသူများထံမှတစ်လလျှင် $ 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပျမ်းမျှရောက်ရှိစီမံကိန်းများ။
Webtalk မှဝင်ငွေကိုထုတ်ပေးပါတယ် ကြော်ငြာ အခြားသူများကဲ့သို့အရောင်း၊ ပရီမီယံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အရည်အချင်းရှိသည့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ငွေပေးငွေယူစရိတ်များကိုအခြားသူများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကသင်နှင့်မျှဝေသည်။
Webtalk'' s ကိုပရီမီယံကြေးပေးသွင်းအဆင့်မြှင့်ပရီမီယံဖုန်းခေါ်နှင့်အသက်ရှင်နေထိုင်-ချက်တင်ထောက်ခံမှုတို့ပါဝင်သည်, ကို virtual အစည်းအဝေးဝန်ဆောင်မှုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့် Webtalk Pro ကိုသီးသန့်အင်္ဂါရပ်ကြေးပေးသွင်းအပေါင်းတို့, တစ်လလျှင်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 15 ဘို့စတင်။
အဆိုပါ Webtalk Pro ကို subscription ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမဟုတ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုနိုင်စွမ်းလည်းပါဝင်သည်, သင့် profile ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူကလူကိုမြင်ရ, အမြတ်ရခြင်းအများအတွက်ရရှိနိုင်ပါကလူနေရာချထား, ကျားမနှင့်အသက်အပိုင်းအခြားအားဖြင့်ရှာဖွေရေးနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖိုင်များကိုပင်အပိုသိုလှောင်မှုကိုအာကာသ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးနိုငျ Webtalk ကော်မရှင်အပေါ် အခြေခံ. မြှင့်တင်ရေးကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကို run ဖို့, ဝယ်ယူကြော်ငြာအာကာသသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကို Webtalk'' s ကိုပရီမီယံအခွက်တဆယ်စုဆောင်းရေးန်ဆောင်မှုသည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းများကြီးထွားကူညီဖို့ရန်။
သငျသညျအခမဲ့ Affiliate အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းလိုက်တဲ့အခါသင်ရည်ညွှန်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အားလုံးဝင်ငွေအပေါ်တစ်ဦး 10% ကော်မရှင်ဝင်ငွေလိမ့်မယ် Webtalk တစ်ဦးအသက်အဘို့။
အသုံးပြုသူလွှဲပြောင်းနှုန်းသည်သင်၏ရေရှည်ဝင်ငွေအလားအလာတစ်လလျှင် $ 1 မှာခန့်မှန်းထားသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် $ 1 ဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒါမဟုတျကွောငျးသိရ Webtalk ရည်ညွှန်းတဲ့ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကိုစတင်များအတွက်မသိမမြင်နိုင်သောနှင့်ဆုချီးမြှင့်လူတိုင်းအကြွေးပြုပါရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နှင့် Webtalk သင်သည်သင်၏တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ရည်ညွှန်းနှင့်၎င်းတို့၏ရည်ညွှန်းများအတွက်အကြွေးဝင်ငွေနဲ့ဒါအပေါ်ခြားနားငါးဒီဂရီမှတဆင့်။
ရဲ့လွှဲပြောင်းနှုန်းပျမ်းမျှလစဉ်ကော်မရှင် $ 1 နှင့်သင်ရောက်ရှိအပေါင်းတို့နှင့်တကွသင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းတစ်ဆယ်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးချင်းစီရည်ညွှန်းကြောင့်ငါးဒီဂရီသို့မဟုတ်ခြားနားအဆင့်ဆင့်ကတဆင့်ဆက်လက်ရှိသည်ဟုဆိုရပါစေသော။
သင်သည်သင်၏ပဉ္စမအဆင့်အနေဖြင့်, သင်တို့၏တတိယအနေဖြင့်, သင်တို့၏ဒုတိယမှသင်၏ပထမဦးဆုံးအဆင့်အထိ, $ 10 မှသင်၏စတုတ္ထကနေ $ 100 $ 1000 တစ်လလျှင် $ 10,000 ဝင်ငွေနဲ့တစ်လလျှင် $ 100,000 နိုင်ဘူး။
နှင့် Webtalk'' s ကို Affiliate Program ကိုရိုးရှင်းတဲ့ "အကြှနျုပျအပျေါလိုကျနာ Webtalk"Facebook သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင် post ကိုအလားအလာဘဝ-ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Affiliate Program ကိုအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုသင့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဆိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုပါဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုလင့်ခ်အသစ်ကအသုံးပြုသူများမောင်းလိုက်တဲ့အခါ Webtalk ကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်-ဆိုင်းငံ့ Affiliate Program ကိုလွှဲပြောင်းဘို့သင့်ကိုအကြွေးဝယ်ပေးသည်။
အပေါ်သင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ဖိတ်ခေါ်သင့်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းလိပ်စာစာအုပ်တင်သွင်းရန် Webtalk သငျတို့သပူးပေါင်းမည်ကြောင့်လူတိုင်းအတွက်အကြွေးရပါလိမ့်မယ်။
Non-အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုများနှင့်ဖိုင်များမျှဝေတဲ့အခါမှာသူတို့သင်လွှဲပြောင်းဘို့အကြွေးဝင်ငွေ ဆိုင်းအပ် သူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်။
သငျသညျ website တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင်, Webtalk သင်သည်သင်၏ site ကိုဧည့်သည်များမှပြသရန်လူမှုရေးခလုတ်များနှင့်နဖူးစည်းစာတမ်းကြော်ငြာများနှင့်ထောက်ပံ့ပေးနှင့်ဤ tools များအသစ်သောအသုံးပြုသူများကိုမောင်းလျှင်သင်အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့အားရည်ညွှန်းများအတွက်အကြွေးချီးမြှင့်ပါတယ်။
Social CPX is Webtalkသင်၏လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများမဆိုကနေချီးမြှင့်သင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းအပေါငျးတို့သခြေရာခံတဲ့မိုဘိုင်း-ပထမဆုံးဒိုင်ခွက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း 's ကို standalone လွှဲပြောင်းပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကလူပူးပေါင်းမည်မျှ, သင်တို့ကိုစေလွှတ်မည်မျှဖိတ်စာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် Webtalk သငျသညျကိုကျေးဇူးတင်သည်သူတို့ထုတ်ပေးပါတယ်ဝင်ငွေပမာဏကိုနှင့်သင့်ကော်မရှင်။
Webtalk အခြား Affiliate လွှဲပြောင်း program ကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည်။
အဆိုပါလူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအဘယ်သူသည် ပူးပေါင်း Webtalk အစောပိုင်းနှင့်ရပ်ရွာအကြီးဆုံးဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းရှိသည်လိမ့်မယ်ကြီးထွားကူညီပေးသည်။
ယနေ့တွင်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းနှစ်ဆ projected နံပါတ်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း2ဘီလီယံကိုလူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများအရှိပါသည်။
သင်တို့ဆီသို့ဖိတ်ခေါ်ပိုကလူ Webtalk ယခုပိုကောင်းသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတစ်ဦးဘဝကို-ပြောင်းလဲနေတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ကြသည်။
ယခု join သူတို့သည်သင့်ဖိတ်ခေါ်မတိုင်မီသင်သိလူတိုင်းအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Webtalk: အောင်မြင်မှု communicate နှင့်ဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၏ preview ကိုအသကျရှငျ Social CPX by Webtalk'' s ကိုတည်ထောင်သူ
အသက်အဘို့အ 50% ဝင်ငွေဝေစု သင်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်ပထမ ဦး ဆုံး 1 သန်း၌ရှိကြ၏လျှင်
အပေါ်ဝင်ငွေရ လွှဲပြောင်း၏5အဆင့်အထိ (ထိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးခြားသော)
ပါဝင္ရန္ Webtalk ယခုနှင့်သင်၏ကွန်ရက်ကိုစတင်တည်ဆောက်ပါ (၁၀၀% အခမဲ့)
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဧပြီလ 2, 2019
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အကြောင်းအရာ Webtalk Tags: Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များ, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Facebook က, LinkedIn တို့, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, လည်ပတ်မှုစနစ်များ, ရည်ညွန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, social networking န်ဆောင်မှုများ, စမ်းသပ်, universal ကို Windows ပလက်ဖောင်း apps များ, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ မှတ်ချက် Leave post navigation
ပင်မစာမျက်နှာ - အကြောင်းအရာ Webtalk - ဘာဖြစ်သလဲ Social CPX, Webtalk'' ကျနော်တို့မှာအများကြီးအကျိုးအမြတ် Affiliate Program ကိုယ့်?